Gee ntị na Targets Ohere na Twitter na SocialCentiv | Martech Zone
Monday, March 23, 2015 Wednesday, September 2, 2015 Douglas Karr
Kwa ụbọchị, ndị ọrụ 230 nde Twitter na-eziga ihe karịrị 500 nde Tweets. Site na iji usoro okwu ziri ezi, azụmaahịa nwere ike ịhazi ndị ahịa mpaghara. Ihe a bu ighota ihe Keywords na aru oru na otu mkparita uka si eme na Twitter. Egwuregwu SocialCentiv na-achọpụta ndị ahịa ndị Tweet ebumnuche ha maka ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ọdịnaya metụtara azụmahịa gị. Nwere ike mgbe ahụ ewetara nwere ahịa na a ezubere iche, ahaziri ike iji metụta ha zuo mkpebi.
N'oge 2014 National Football League oge, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 5 football fans na-ekwu banyere otu egwuregwu kachasị amasị ha. Maka ndị na-ere egwuregwu, ndị ahụ bụ ohere nde mmadụ ise. Iji maa atụ, ihe dị ka otu narị puku na puku iri ise na ise gbasara ndị Houston Texans, dịka nke dị n'elu site na @Mr_Polo. Tweets ndị a na-enye ndị na-ere ahịa egwuregwu ohere magburu onwe ya ịzaghachi onye na-akwado ya site na iji ego na onyinye na tiketi na ngwa ahịa.
Họrọ ngwakọta ziri ezi nke isiokwu dị oke mkpa maka mgbasa ozi ahịa iji nwee ihe ịga nke ọma na usoro mmekọrịta a. Ebe ọ bụ na Twitter na-enye ohere nghọta na-enweghị atụ banyere mmetụta ndị mmadụ n'otu oge, ndị na-ere ahịa ga-enyocha etu ndị ahịa si eji Twitter ma wuo usoro isiokwu ha. Bernard Perrine, CEO nke Egwuregwu SocialCentiv
Hazie Mgbasa Ozi Gị - Mee ka mkpọsa gị nwee isi okwu na ihe mkpali iji nyere azụmahịa gị aka itolite.
Zọpụta Oge & Ego - Chọta Tweets ndị dị mkpa ka ị nwee ike ịme ezigbo mkparịta ụka gị na ndị dị adị n’ezie na ozi ha chọrọ mgbe ha chọrọ ya.
Ọkaibe mmụta - Oge ọ bụla ị zaghachiri Tweet, SocialCentiv na-amụta ma na-echeta ụdị Tweets kachasị mkpa maka azụmaahịa gị.
Ebumnuche Geographic - Ruo ndị na-azụ ahịa dị mkpa site na ịchekwa Tweets mpaghara.
Brandma ọkwa - Soro ndị ahịa nwere ike, na-ewetara azụmahịa gị uche ha.
Mmekọrịta ozugbo - Ozugbo "retweet", "soro", "ọkacha mmasị", na "zaghachi" ndị ahịa.
Nghọta miri emi - Tụlee mkparịta ụka Twitter na ndị ahịa na-eji eserese, nyocha ọnwa na ọnwa wee mee ihe dabere na ihe ị mụtara.
Nzaghachi ga-atụ aro - Akụrụngwa ahụ na-enye aro azịza maka ndị debanyere aha iji kpọtụrụ ndị na-azụ ahịa ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Live Nkwado - Soro ndị ọrụ nkwado anyị na-akparịta ụka oge ọ bụla ị nwere ajụjụ site na iji ngwa SocialCentiv.
Mmekọrịta MailChimp - Nọgidenụ na-enwe mmekọrịta gị na ndị ahịa na anyị wuru-na mwekota na MailChimp nke na-akpaghị aka na-ebubata ahịa ozi kọntaktị ozugbo na SocialCentiv.
N'iji usoro okwu ziri ezi, ndị na-ere egwuregwu nwere ike ịchọta ndị ahịa obodo na Twitters - nke pụtara ihe ruru pasent 50 pịa-site-ọnụego! Ihe a bu ighota nke okwu nkpuru okwu na otu esi akparita uka na Twitter. SocialCentiv na-achọpụta ndị ahịa ndị Tweet ebumnuche ha maka ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ọdịnaya metụtara azụmahịa gị. Nwere ike mgbe ahụ ewetara nwere ahịa na a ezubere iche, ahaziri ike iji metụta ha zuo mkpebi.
Anyị na-enye ọrụ ndị ejisiri ike, ebe SocialCentiv na-ejikwa mgbasa ozi na nsonye na ndị Fans na Twitter, yana ụdị ịme onwe gị maka ụlọ ọrụ na-ahọrọ ilekọta nke ahụ n'onwe ha. Kedu ụzọ ọ bụla, ndị ahịa anyị na-enweta ngwa ọrụ dị ike ma dịkwa ọnụ ala nke na-enyere ha aka iru ndị ahịa ozi ozi ahịa n'oge ahụ ndị ahụ na-anabata nnabata ha. Bernard Perrine, onye isi oche nke SocialCentiv
Dịka ọmụmaatụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 25 edepụtara na Twitter banyere otu egwuregwu kachasị amasị ha n'ime afọ gara aga. Onye ọ bụla n’ime ha bụ onye ndu jidere, nke na-anọchite onye ofufe na-eche echiche banyere egwuregwu ma nwee ike kpalie ịzụta tiketi, ma ọ bụ mkpuchi otu ma ọ bụ uwe elu, ma ọ bụ banye ebe ekpochapụ. Egwuregwu SocialCentiv na-adọta ndị tweets ahụ n'ime mmiri iyi ebe otu egwuregwu nwere ike "@" zaghachi nzaghachi na Tweet na ego "nudge" iji zụta:
@NFLfan, anyị nọnyeere gị - oge ịgba bọọlụ enweghị ike ibido n'oge na-adịghị anya. Iji jide n'aka na ị dịla njikere maka ọdụ ọdụ mbụ gị, kedụ ihe 15% gbanyụrụ ihe dị na ụlọ ahịa ofufe anyị? Pịa ebe a maka onyinye.
SocialCentiv na-ekwuputa na o nwetala ogo ogo 80 na azụmaahịa azụmaahịa egwuregwu ya. Companylọ ọrụ ahụ kwenyere na ọ bụ nlọghachi na ntinye ego kpatara ihe uto ahụ. Maka ụfọdụ ndị ahịa, SocialCentiv nwere CPC nke dị n'okpuru $ 1 wee nweta CTR nke ruru 42 - 52 pasent na azụmaahịa azụmaahịa egwuregwu. Ruo ROI, ndị debanyere aha na-ahụ nkezi 34 pasent nke ego Tweeted ebudatara ka onye ahịa wee nwee ike ịgbapụta onyinye ahụ.
Mara: Anyị bụ ndị mmekọ Egwuregwu SocialCentiv.
Tags: nflelekọta mmadụna-elekọta mmadụ na-ege ntịelekọta mmadụ na-enyeelekọta mmadụihe mkpali twitterna-ege ntị twittertwitter na-enye
Mar 25, 2015 na 5: 15 AM
Anyị na-agbaso mmelite ọhụụ site na netwọkụ mmekọrịta a, ọkachasị maka ohere yana kwa maka ebumnuche ahịa iji mgbasa ozi mmekọrịta a.